Al Shabaab oo sheegatay Mas'uuliyadda Weerar 10 qof Kenyaan ah lagu dilay oo ka dhacay Wajeer.
Friday December 06, 2019 - 20:34:42 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Ciidamo katirsan Xarakada Al Shabaab ayaa weerar dhiigbadan ku daatay markale ka fuliyay dhulka Soomaalida NFD ee Kenya gummeysato.
War rasmi ah oo kasoo baxay taliska ciidanka Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa lagu sheegay in weerar guulaystay lagu qaaday gaari Bas ah oo ay la socdeen dad Kiristaan Kenyaati ah xilli uu ku socdaalayay deegaanka Kutulo oo katirsan gobolka Wajeer.
Al Shabaab waxay sheegtay in ugu yaraan 10 qof Kenyaan ah ay ku dishay weerarka "Mujaahidiinta ayaa weerar ka dhacay gobolka NFD ku dilay 10 qof Saliibiyiin Kenyaan ah kadib markii ay wadada ugaleen gaari ka yimid magaalada Nairobi kunasii jeeday degmada Mandheera" ayaa lagu yiri warka kasoo baxay Al Shabaab.
Idaacadda Andalus ayaa baahisay in xoogaga Al Shabaab ay kala saareen dadkii la socday gaariga baska ah waxaa lasii daayay dhammaan dadkii muslimiinta ahaa ee gaariga la socday halka la laayay dhamman dadkii Kenyaanka ahaa.
Wararka ayaa intaas ku daraya in xoogaggii weerarka geystay ay si nabad gelya ah goobta uga dhaqaaqeen, saraakiisha booliska Kenya ayaa durbadiiba xaqiijiyay weerarkan khasaaraha badan lagu dilay ee ka dhacay gobolka Wajeer.